Nhau - Kukwira kwemutengo weCobalt kwakapfuura zvinotarisirwa kana kuti kuchadzokera kune zvine musoro chikamu
Kukwira kwemutengo weCobalt kwakapfuura zvinotarisirwa kana kuti kuchadzokera kune zvine musoro chikamu
Muchikamu chechipiri chegore ra2020, huwandu hwese hwekunze hwecobalt mbishi zvigadzirwa hwaisvika matani mazana masere nemazana masere, nekudzikira kwegore-ne-gore kwema19%. Pakati pavo, huwandu hwekupinza hwecobalt ore hwaive 0100 matani esimbi matani, iine gore-gore-gore kuderera kwe92%; kuunza kwese kwepakati zvigadzirwa zve cobalt hydrometallurgy yaive 15800 matani esimbi matani, iine gore-gore-gore kuderera kwe15%; iyo huwandu hwakazara wecobalt mbichana inopinzwa kunze kwaisvika 0800 matani esimbi matani, iine gore-gore-gore kuwedzera kwe57%.
Mutengo wecobalt mumusika wepamba wakakwira zvakanyanya. Kubva pakati paChikunguru, mitengo yeelectrolytic cobalt, cobalt sulphate uye cobalt chloride yakawedzera neinenge 10% - 11%, iri yakakwira kupfuura yeiyo yapfuura May June nguva. Iko kuwedzera kwemutengo kwe electrolytic cobalt, cobalt sulfate uye cobalt chloride kubva may kusvika June ingangoita 3-4%.
Mutengo shanduko yeSMM cobalt zvigadzirwa kubva muna Chivabvu 8 kusvika Chikunguru 31, 2020
Mushure mepakati paJune, iyo yakatarwa mutengo weelectrolytic cobalt kune cobalt sulphate zvishoma nezvishoma inosvika ku1, kunyanya nekuda kwekudiwa kwezvinhu zvebhatiri.
Kufananidza kweSMM cobalt zvigadzirwa kubva Chivabvu 8 kusvika Chikunguru 31, 2020
Kubvira muna Chivabvu kusvika Chikumi gore rino, chinhu chete chakatsigira kukwira kwemitengo kwaive kuvharwa kweSouth Africa muna Kubvumbi, uye kushomeka kwemumba cobalt zvigadzirwa kubva muna Chivabvu kusvika Chikumi. Nekudaro, iwo musika wepamba unonyungudutsa chigadzirwa zvakakosha zvichiri kuwanda, cobalt sulfate yakatanga kuoneka mumwedzi we de stocking, hwaro hwakavandudzwa. Yepazasi yekudiwa haina kuwedzera zvakanyanya, yakawedzera 3C dhijitari kudiwa kwemagetsi mukutenga-mwaka, kukwira kwemutengo kwanga kuri kudiki.
18650 Nimh, 3.7 Rechargeable Bhatiri, Lithium Ion Polymer Bhatiri, 12v Lithium Ion Inotakurisa Bhatiri, Li Bhatiri, 12 Volt Inotakurisa Lithium Battery Pack, Zvese Zvigadzirwa